စွဲသင်ျ? မြင်ချင်အစ်မင်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်? ကောင်းစွာ၊သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒများအတွက်ဆက်ဆံ-အာရုံမိသားစုဖော်ရွေပျော်စရာများမှာခပ်ဒီဦးတည်ချက်ကိုအတွက်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုမပါဘဲဝင်သင်ချစ်ကြလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်သင်တို့အဘို့အတွင်းညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများ! အဆိုပါအဖွဲ့သည်ဒီမှာ AGG ယိုလိုဖဲကြိုးဖြတ်ဖို့သင်ကြိုဆိုပါတယ်စာၾကည့္တိုက္၏XXX ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလိမ့်မည်ဟုလုံးဝအနိုင်ယူပစ်လို့ရပြီပေါ့။ ကတည်းကကျွန်တော်တို့စတင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ခဲ့သည်မှာအားဖြင့်လှုံ့ဆော်တစ်ခုမှာမစ်ရှင်:တူတူထားရန်အများဆုံးနှိုးဆှအရသာဆက်ဆံသင်ျဂိမ်းစုဆောင်းမှု။, ကျွန်တော်ယုံကြည်တာအနိုင်ရတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်အတြင္း–လူတိုင်းနဲ့အခြားအတော်လေးနည်းနည်းနောက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှစီမံခန့်ခွဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်၏အညစ်အကြေးသည်အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆည်းပူး၏ထိပ်မှစားပွဲ:ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်စေသည်အရာကိုသိယောက်ျားတွေအမှန်ခြစ်မှကြွလာသောအခါသူကညီအစ်မနှင့်လိင်! သင်ျအရေးယူအွန်လိုင်းမှသာပိုပြီးရေပန်းစားလာတဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့စံချိန်အဆင့်ဆင့်အတွက်ဝယ်လိုအားဤအမျိုးအစား။ ဒါကြောင့်၊ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်များအတွက်အရေးယူသင်သည်အစာကြေဖို့ပိုလာရန်အတွက်လွန်းမဝေးအနာဂတ်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။, အဘယ်ကြောင့်မတက်လက်မှတ်ထိုးဤလက်ငင်းနှင့်အကြည့်မှာ? သင်သိချင်!
ဘာအံ့သြစေခြင်းငှါ၊သင်တို့ကိုအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းအခမဲ့သင်ျဂိမ်းများသောအချက်ဖြစ်ပါသည်နိုင်ခဲ့င့်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ချင်သူများအတွက်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်၏လိဂ်ဒဏ္ဍာရီအဘယ်မှာရှိအာရုံစူးစိုက်အပေါ်ရုံပေးခြင်းသင်အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းနှင့်အထို့နောက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျန်ထွက်လှိမ့်မရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ ဆိုရင်ကျနော်တို့ပေးမည်ဟုဆိုအခမဲ့ဂိမ်း၊သင်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံလျှင်သင်ထင်ကမည်သည့်ကောင်း၊မှန်သော? တူညိွေမက်၊ကျနော်တို့တညျဆောကျပါလိမ့်မယ်တစ်စိတ်ကူးအသိုင်းအလာအသွား-မှအမည်သည်ညီအစ်ပုံစံလိင်ဂိမ်းများ။, မိသားစုအသည်ကြီးနှင့်ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့တဦးဖန်တီးဖို့ဒီတော့အမျိုးအစားကိုသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အတွက်ဂိမ်းရှိသည်! အနိုင်ဖြစ်ခြင်းအပြင်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့၊သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်ဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြုပြီးမှတဆင့်လုံးဝသင့်ရဲ့အဘနှင့်အတူအဘယ်သူမျှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ရ။ ဤခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူသွားဖြစ်လူအများကြီးအတော်လေးမှန်ကန်စွာသံသယဒေါင်းလုဒ်ညမ်းဆက်စပ်ဖိုင်များ–ကျနော်တို့အပြစ်တင်လို့မရဘူး! ဆဲ၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အတွင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့အစစ်အမှန်သဘောတူခဲ့ကြတဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်းစုသင်ျဂိမ္းချမ်းသာအဘို့အသင်သည်အတွေ့အကြုံ။, ဤသည်အမှန်တကယ်ဆု၊မိတ်ဆွေ–ငါ့ကိုယုံကြည်ကြောင်း!
အစ်မလိင်ဂိမ်းများစတင္ခဲ့အာက္တိုဘာလတြင္ ၂၀၁၈၁၂:ငါတို့သည်ယခုရှိသည် ၂၀။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ထုတ်ဝေဖို့ပတ်ပတ်လည် ၅ မှာဂိမ်းနှစ်၊မေလလျော့ချသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်အပေါ်မူတည်ပြီးအတိမ်အနက်နှင့်အစ၏ရှုပ်ထွေးမှုခေါင်းစဉ်ကျနော်တို့အပေါ်အလုပ်လုပ်နေ။ AGG ယိုအလွန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေးခြင်း၏သင်အများကြီးရွေးချယ်စရာ၊ဒါကြောင့်အဲဒီအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့၏အသားတင်အတော်လေးကျယ်ပြန့်လာသောအခါမှဒီဇိုင်း။ အဘယ်သို့ငါဒီနားမှာဆိုလို၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊အတွဲတွေအများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစား၊ကိုလည်းသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထူးခြားတဲ့အနုပညာ၊playstyles နှင့်ပင်အခက်အခဲအတွက်သင်ျဂိမ်းများပြီ။, တယောက်မျှမရှိင့်တိကျတဲ့အဓိက–ကလွဲရင်အားလုံးဂိမ်းအချို့ကိုပုံစံရှိသည် sisterly ချစ်ပါဝင်ပတ်သက်။ အိုး၊ကောင်းပါပြီ:ပါကကျေးဇူးပြုပြီးသည်သင်ျဂိမ္းချာ၊ဒါသင်လိုပါလိမ့်မယ်မှာစာသားဖတ်မှအနည်းဆုံးအနည်းနည်းနားလည်ရန်အကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အားလုံးဇာတ်ကောင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်၊အ storylines အချို့အကောင်းဆုံးအပိုင်းလေးတွေဒီမှာပါ:ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ကိုခံစား smut သင်ဖြတ်ပြီးလာသောအများကြီးပိုပြီးပျော်စရာ! အားလုံးဂိမ်းများလည်းအောင်မြင်မှုများရှိသည်နှင့်ဤကယ်တင်တွဲ၊ဒါကြောင့်သင်တိုးတက်မှုနိုင်၊နုတ်ထွက်နှင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမှာစိတ်ပူစရာမလိုဘဲကိုယ်တိုင်ချွေတာသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်း။, တော်တော်လျောက်ပတ်မှုစနစ်၊မှန်သော? အိပ်မက်ရဲ့မည်သူမဆိုများအတွက်ပေးချင်သောအဆင်ပြေတဲ့နေရာရဖို့မိမိတို့လက်ကိုအပေါ်သင်ျဂိမ္းကောင်းမြတ်ခြင်း!
အဖက်ဆာဗာများအတွက်အစ်မလိင်ဂိမ်းများသည်အမှန်တကယ်ယိုထုပ်ပိုးသောသူလူတို့နှင့်အတူဝေမျှထားပါသည်အကြံပေးချက်များ၊အကြံဉာဏ်၊ပုံပြင်နဲ့တော့ဆက်စပ်ဂိမ်းကျနော်တို့ရရှိပါသည်။ သင်ရိုက်ကူးနိုင်အတွေရဲ့အရေအတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်ပင်မျှဝေညမ်းချင်တယ်ဆိုရင်။ ရှိပါတယ်ကတည်းကကောင်းစွာကျော် ၆၊၀၀၀ ဖွဲ့ဝင်၊စာသားရွှေ့နိုင်ပါတယ်တော်တော်လျင်အမြန်ပါလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းကိုရှာဖွေတစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်အကြောင်းယုတ်နှမသံုးေၿဖ။။ အပြင်ဖက်ဆာဗာက၊ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုသောပို့စ်နှင့်ရှယ်ယာတွေအများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာ။, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ဧရိယာအဂုဏ်ယူစိတ်အပိုင်း၊အဘယ်မှာရှိအသိုင်းအရှေ့ဆက်သွားကြပြီနှင့်ဖန်တီး extensions နှင့်လပ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းများလုပ်ဖို့သူတို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းအချို့ကိုအတွက်။ ဤပါဝင်နိုင်ပါသည်ဇာတ်ကောင်ပုံစံဒီဇိုင်းအသစ်၊အပိုဆောင်းဖှေ၊အခက်အခဲချိန်ညှိပြီးတော့။ အောင်မြင်နေသောမသန်စွမ်းအသုံးပြုသည့်အခါဤဂုဏ်ယူသည်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကတော်တော်လေးအေးနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ကစား!
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအပေါ်အခြေခံစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအင်ဂျင်၊အရာကိုဆိုလိုသည်သင်တော်တော်အများကြီးအာမခံအမြင်အာရုံဗေဒလိမ့်မည်။ ကျွန်မကတော့အချိန်အကြာကြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အပေါ်ဌာနခွဲရှိသည်မှန်နှင့်အလူအရာင်းအတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်ညမ်း။ ကျွန်တော်လည်းအရည်အချင်းအဖွဲ့အနုပညာရှင်များ၏အထောက်အကူပြုဖို့အတွက်အတူ-ဂိမ်းဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးအဖြစ်ပြန်လိင်ဗီဒီယိုကျနော်တို့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ပြွန်။ မှန်တယ်:ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည် ၁၀ နာရီဂတ်ပြန်လိင်အကြောင်းသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာဖွေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ–အပင်ရှိအသံသရုပ်ဆောင်!, နေစဉ်ထုတ်လုပ်မှုမဟုတ်ခဲ့၊စျေးပေါနေမယ်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ယောက်သော ၃D လိင်သင်ျ၊တော်တော်အများကြီးပိုကောင်းအစက်အပြောက်ဖို့အွန်လိုင်းကရ။ လူတိုင်းသိသောချင်တယ်ဆိုရင်သင်အဆင့်ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံအတွက်ဂရပ်ဖစ်ဌာန၊အစ်မလိင်ဂိမ်းများသည်သာအပြောက်သင်လိုအပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကို။
ကျွန်တော်ယုံကြည်ကျွန်မတော်တော်များများအရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းဖို့လိုအပ်ကြောင်း။ ကျေးဇူးတင်စကားဤမျှလောက်အဘို့အဖတ်ကျေးဇူးပြုပြီး၊အတိအစဉ်အမြဲဒီနေရာမှာလာပြီးအချို့ခံစားလာညီသင်ျဂိမ္းကိုကောင်းမြတ်ခြင်း။ အစ်မလိင်ဂိမ်းများသည်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းကွန်ယက်ဝန်းကျင်–ဒါကြောင့်တက်လက်မှတ်ထိုးရ!